Zimbabwe's white farmers: Who will pay compensation? | Accelerating Future
BBC: Zimbabwe's white farmers: Who will pay compensation?
12 Related Articles, between 2019-03-21 and 2019-03-04
"Lives shattered": Cyclone death soars with hundreds still missing. A week after Cyclone Idai lashed southern Africa​, flooding still raged as torrential rains caused a dam to overflow in Zimbabwe, threatening riverside populations >>
A 71-year-old grandmother walked miles to donate to cyclone survivors. Zimbabwe's richest man noticed. Plaxedes Dilon is being praised across Zimbabwe after she walked several kilometers from the Harare capital, carrying clothing and household items she wanted to donate to cyclone survivors on her head to the Highlands Presbyterian Church. >>
Aid finally reaches Zimbabwe village 12 days after cyclone. Surprised members of a cyclone-hit community in Zimbabwe paused from retrieving and burying their dead to welcome the first humanitarian aid from the outside world as it arrived nearly two weeks after the storm. >>
Cyclone Idai sweeps across Zimbabwe, killing dozens. At least 31 people have been killed and dozens are reported missing in parts of Eastern Zimbabwe after a Tropical Cyclone ripped through the country. >>
Cyclone Idai: The hotel manager providing a safe haven in Zimbabwe. A hotel in Zimbabwe is sheltering hundreds of people who have lost their homes in Cyclone Idai. >>
Cyclone Idai: Zimbabwe's desperate search for the missing. Communities in Zimbabwe continue to search through rubble for family members missing after the storm. >>
Dozens killed as cyclone sweeps across Zimbabwe >>
Grandmother, 71, walks miles to donate to cyclone survivors. A selfless act by a 71-year-old woman has caught the attention of Zimbabwe's richest man, who called the grandmother's several-mile trek while carrying clothing and household items for cyclone survivors "one of the most remarkable acts of compassion I have ever seen." >>
Zimbabwe's youngest lawmaker faces subversion charge. Zimbabwe's youngest lawmaker faces a subversion charge for allegedly asking constituents to support anti-government protests crushed by the military in January. >>